Ny loza ateraky ny toerana fitsangantsanganana azo antoka
Home » Vaovao momba ny fizahantany » Ny loza ateraky ny toerana fitsangantsanganana azo antoka
Mpanoratra Aleksandra Gardasevic-Slavuljica
Vao nahazo fankatoavana lehibe ny fizahantany Montenegro ny World Travel and Tourism Council (WTTC) .
Montenegro dia iray amin'ny toeran-kaleha miisa 100 manerantany nomena ny Safe Travels Stamp ho an'ny Toerana itodiana. Aleksandra Gardasevic-Slavuljica, nilaza tamin'ny eTurboNeww fa nahagaga izany satria nandalo ny tampon'ny valanaretina Coronavirus ny firenena.
Toa ny dikany namboarina izay tokony tandindon'ny Safe Travels Stamp dia very tamin'ny fandikan-teny, na tsy natsipy mazava tamin'ny mpampanonta azy. Izao no antony.
Vao avy nifidy i Montenegro ary miady hevitra ny fanovana fahefana.
Ny fifidianana dia nahatonga fandresena ho an'ny antoko mpanohitra sy ny fianjeran'ny fitondrana DPS, izay nitondra ny firenena hatramin'ny nananganana ny rafitra antoko-maro tamin'ny taona 1990. Tamin'ny 31 Aogositra, ny mpitarika ny firaisan-kinan'ny mpanohitra telo, For the Future of Montenegro, Peace is Our Nation ary amin'ny Black and White, nanaiky ny hanangana governemanta manam-pahaizana ary hanohy hiasa amin'ny fizotry ny fidiran'ny Vondrona Eropeana.
The Tapak-dia azo antoka eo afovoan'ny adihevitra vaovao ao an-trano ny fifanakalozan-kevitra.
Aleksandra Gardasevic-Slavuljica, ny mpanoratra an'ity lahatsoratra hevitra ity. Aleksandra koa dia filohan'ny faritra Balkan any Etazonia fananganana.travel fifanakalozan-kevitra eo amin'ireo matihanina amin'ny fizahantany any amin'ny firenena 118.
Ny fizahantany dia indostria miankina amin'ny lazan'ny toerana itodiana. Izahay dia vavolombelona fa very laza sy fahatokisan'ny mpizahatany i Montenegro.
Fanandisoan-kevitra fotsiny ny hoe Montenegro dia toerana manan-daza satria tsy azo hararaotina velively ny fahafahan'ny fizahan-tany eto amintsika.
COVID dia nampiharihary ny zava-drehetra. Miaraka amin'ny COVID, dia teo ny NKT, ny Fikambanana Nasionaly tompon'andraikitra amin'ny krizy. Avy eo misy ny National Tourism Organization (NTO), taorian'izany dia tsy nisy korona, avy eo corona-boom, ary farany - nisy fahatapahana ny lazan'ilay toerana haleha.
Izany no antony ilantsika maika ny NKT vaovao hajaina, izay hatokisan'ny olom-pirenena. Ary ilay NTO vaovao, izay ho mpanentana matihanina amin'ny toerana itadiavana olona any Montenegro. Ireo no fepetra mialoha hanarenana ny fizahan-tany. Izao no antony:
Ny fanjakana miahy ny fahasalaman'ny olom-pireneny ihany no afaka manana fihetsika tompon'andraikitra amin'ny mpizahatany.
Paikady fifampiresahana marina ihany no mampanantena laza sy laza.
Ny mponina salama sy afa-po dia fepetra takiana amin'ny fizahantany azo antoka. Tsy toeram-pizahan-tany azo antoka i Montenegro amin'izao fotoana izao.
Ho fanatevenana ny zava-mahatsikaiky dia nahazo ny taratasy fanamarinana “Safe Travels” avy amin'ny World Council and Travel Council (WTTC) just amin'izao andro izao. Ny tanjon'ny fampiasana an'io fitomboka io dia ny hampiroboroboana ny dia lavitra mandritra ny COVID-19 sy hahafahan'ny mpizahatany mamantatra mora ny faritra fizahan-tany azo antoka. Misongadina ao amin'ny tranokala, tambajotra sosialy, fotodrafitrasa ny famantarana, izay manamora ny fahafahan'ny mpizahatany misafidy toerana azo antoka.
Ny fizotran'ny fahazoana ny mari-pamantarana Safe Travels dia toy izao: Ny WTTC dia manome protokolon'ny fiarovana ny toeran-kafa na ny mpandray anjara. Ny Protocols dia antontan-taratasy efa voasoratra mialoha. Rehefa nifanarahana ny protokolota dia omen'ny WTTC tombo-kase "Safe Travels" ho azy ireo. Ny teboka fanombohan'ny WTTC dia ny fahatokisana ireo manampahefana nasionaly satria mihevitra azy ireo ho andrim-panjakana tompon'andraikitra sy mendri-kaja izy ireo. Ataoko fa tsy azo atao izany ..
Araka izany, ny fizahan-tany Montenegrin, eo an-tampon'ny valan'aretina, dia voaravaka amin'ny marika “Safe Travel”.
Tany Montenegro, io zava-misy manan-danja io dia tokony ho very tamin'ny fandikana.
Noho izany, ny NTO izao dia manana fitaovana hananganana marika Montenegro ho toerana fitsangantsanganana azo antoka. Na mbola hanana fahasahiana hanao izany izy amin'izao fotoana izao dia mbola ho jerena. Fa tsy izay ihany.
Ny biraon'ny fizahantany nasionaly dia tsy vitan'ny hoe tompon'ity mari-pamantarana ity, fa nahazo alalana hizara bebe kokoa ny hajia. Mikasika izany dia nandefa fanasana ho an'ny hotely, trano fisakafoanana, kaompaniam-pitaterana an'habakabaka ny NTO mba hanao fangatahana sy hahazoana ny "Safe Travels Stamp.". Raha mitohy ny fampielezan-kevitra, dia mety hitranga fa, raha mirehitra ny satro-boninahitra, dia homena marika azo antoka i Montenegro. Eo no mipoitra ny olana.
Ny fampiroboroboana ny fizahan-tany azo antoka sy ny fivezivezena azo antoka, amin'ny fotoana ahafantarana antsika ho iray amin'ny firenena areti-mifindra indrindra ao amin'ny faritra, dia mety ho marimaritra iraisana tsy azo avela amin'ilay toerana.
Manantena aho fa ho fantatry ny NTO ny andraikiny ary hampiato ny fampiroboroboana ny marika "Safe Travel" ny NTO. Ny marika WTTC dia tokony hampiasaina, saingy rehefa tratra ny toe-javatra misy sy rehefa misy fotoana "salama". Mandra-pahatongan'izany dia avelao izy ireo hiasa amin'ny fiomanana amin'ny fepetra toy izany.
Noho izany, ny fahafaha-mamorona fanamarinana nasionaly dia tokony horaisina ho toy ny mari-pamantarana izay azo ekena ho "Montenegro - Responsible Destination".
Tompon'andraikitra, tsy azo antoka, satria ny toerana azo antoka sy ny dia lavitra dia tsy misy ankehitriny. Ny rafi-panamarinana nasionaly dia tokony ahitana manam-pahaizana avy amin'ny NTO sy ny Ministeran'ny Fahasalamana. Eny - manam-pahaizana.
Ny mari-pahaizana WTTC "Safe Travels Stamp" dia tsy manana rafitra fanaraha-maso mitohy, fa miankina amin'ny andraikitry ny NTO. Mifanohitra amin'izany, ny fampiharana ny mari-pankasitrahana nasionaly dia midika fanaraha-maso henjana amin'ny fampiharana ny protokoloka. Ny protokol toy izany dia tsy litera an-taratasy fotsiny, fa antontan-taratasy "miaina" sy mamatotra izay azo ovaina.
Rehefa omena marika manokana ny fizahantany Montenegrin dia hipetraka amin'ny hotely ireo vahiny matoky antsika. Hafatra ho an'ireo mpizahatany izany fa tompon'andraikitra tompon'andraikitra izahay ary vonona handray azy ireo.
Ny mari-pankasitrahana voamarika hoe "Montenegro - toerana iray tompon'andraikitra" dia mety ho marika Montenegro vaovao, izay hanamafy ny lazany ary hamerina ny fahatokisan'ny mpizahatany. Ho fanampin'izany, tongasoa ny WTTC sy ireo marika solontena hafa.
Izany no antony anaovako antso avo mba tsy hamela an'i Montenegro homena marika ho toerana azo antoka mandritra ny tetezamita ny fahefana politika taorian'ny fifidianana farany natao mba hialana amin'ny fihanaky ny valanaretina. Tsotra ny antony. Tsy toerana azo antoka i Montenegro amin'izao fotoana izao.
Tsy hamela antsika ny mpizahatany amin'ny famitahana toy izany.
Nilaza i Gloria Guevaras, CEO an'ny WTTC eTurboNews tsy miankina:
“Ny hajia dia tsy misy ifandraisany amin'ny tranga na toe-javatra COVID ankehitriny. Momba ny protokol. Ny fitomboka dia fanekena fotsiny fa ny protokolota dia mitovy lenta amin'ny sehatra tsy miankina manerantany.
Ny fitomboka dia tsy misy ifandraisany amin'ny risika na ny toetran'ny toerana itodiana. Ny firenena rehetra dia mitantana ny toe-javatra misy azy avy. Misokatra na akaiky ny toerana mifototra amin'ireo mari-pahaizana momba ny fanombanana ny loza mety hitranga dia tsy refesin'i WTTC izany. ”
Ny Bali Hotel Association dia manadio ny morontsiraka
UNWTO Ny politika sy ny sarontava sosialy momba ny fiaraha-monina dia TSIA lehibe